Naqshad Weyn | November 2019
Ugu Weyn Ee Naqshad Weyn
Jiilaalkii ugu xiisaha badnaa ee jiilaalka jilicsan
Rhododendrons waxaa loo arkaa dhirta caanka ah ee caanka ah ee naqshadeynta naqshada muuqaalka, sida geed geed ubax ah oo si sahlan u beddelaya beerta jasiiradda cagaaran. Dhibicda wanaagsan ee taranka xoolaha ayaa ah tiro aad u tiro badan oo ah nooca barafoobaya ee dhirta, taas oo si sahlan u noolaan karta celceliska qoyaanka.
Sifooyinka beerta yaaqaya ee koraya
Cabbiraadda qoyaanka ah ee qaxwada leh ee leh buluug-cagaaran oo koraya oo ka soo baxa laydhka ayaa inta badan laga helaa sariiraha ubaxa, waa beer ycca ama filamentous. Fiiro badan ayaa soo jiidatay wadiiqooyin aan caadi aheyn oo la jiiday cidhifyada caleemaha, iyo inflorescence weyn oo qaab ah xayndaab oo leh dawanno jilicsan oo caddaan ah.
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaato gelenium sii kordhaya
Gelenium wuxuu leeyahay dabeecad balaaran. Warshadani waa wakiil ka tirsan qoyska Compositae waxaana laga helay dhaqan tan iyo 1635. Si kastaba ha ahaatee, ubaxa waxaa markii hore lagu sharxay shaqada Karl Linnaeus ee 1755. Dhammaan dhirta noocyada noocaan ah waxay yeelan karaan dhererka gebi ahaanba kala duwan ee baadiyaha, waxayna ku xiran tahay kala duwanaanta, waxay kala duwan tahay 30 illaa 150 cm.
Isticmaalida stevia ah oo qurux badan waxaa loo isticmaalaa inta badan nashqadaynta muuqaalka. Wuu jirayaa muddo dheer, ilaalinta qurxinta ilaa dayrta goor dambe. Daryeelka waa mid aan qabyo ahayn, uma baahna garters oo wuxuu awood u leeyahay inuu ku farxo xitaa ubaxlaha leh midabka buuxa. Dhibaatada dhirta waxaa ka soo baxa oo keliya dhexdhexaadyada, kuwaas oo aan lagu go'aaminin qaabka noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan.
La kulan noocyada caanka ah ee larch
Larch waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee geedaha. Waxay u dhigantaa reerka geed. Geedka waxaa inta badan laga helaa kaymaha, buuraha, meelaha lagu ciyaaro. Intaa waxaa dheer, waxay noqon kartaa qayb qurux badan oo ah qurxinta beertaada. Tani waa la qiimeeyaa ma aha oo kaliya quruxdiisa, laakiin sidoo kale loogu noolaan karo, adkaysi u dhirta qoryaha.
Koraaya on site: beerto on geedo iyo daryeelka ee bannaanka u furan
Levka waa geedo lagu qurxiyo oo leh caraf udgoon, taas oo sannado badan lagu qurxiyey beeraha dadweynaha iyo beeraha. Ubaxyo badan oo midab leh ayaa midba midka kale u eg cawska kaynta. Macmuurku wuxuu noqon karaa hal-, laba-sano ama dhir-dheeraan ah, in ka badan labaatan nooc oo levkoy ah ayaa loo yaqaan. Sidaa daraadeed, warshadda bidixda ah waa beer beer ah ama beerta dhirta, inta badan la koray bidix, kuwaas oo bannaanka u yaqaanno mattiola.
Sidee loo sameeyaa qulqulka qalalan ee waddanka?
Ma ahan waqti dheer, qarnigii labaatanaad, fikradda cusub ayaa soo baxday, caan ka mid ah taas oo si dhaqso ah u koraysa dalal badan oo adduunka ah. Waxay ku saabsan tahay naqshada muuqaalka. Shuruudaha fudud, tani waa dhirta iyo dhirta. Marka la eego dareenka ballaaran, waa qaab farshaxan oo dhismaha, naqshadeynta iyo dhismaha la isku daro.
Sida loo sameeyo dhagaxyo gacmahaaga ah
Aan degganeyn xagaaga oo dhan waxay jecel yihiin in ay tinker beerta beer ama beer. Waxaa jira mulkiilayaasha magaalooyinka banaankeeda, waxaana jira dad badan oo jecel in ay waqti wakhti ku qaataan jilicsanaanta dabeecadda, ee aan ku kicin, laakiin waxay ku raaxeeysataa quruxda la heli karo. Waxaa lagula talin karaa inay diyaariyaan dhagaxyo, kuwaas oo xitaa lagu sameyn karo gacanta, dacha ama dhulkooda.
Sidee loo sameeyaa xabagta gacmahaaga
Naqshad casri ah oo casri ah, farsamooyin iyo habab cusub ayaa si joogta ah u soo baxaya si loo qurxiyo dayrka xagaaga xagaaga. Waqtigan xaadirka ah, gabayo waa kuwo caan ah, naqshadeeyayaasha muuqaalku waxay u isticmaalaan maaha sida qurxinta, laakiin sidoo kale waxay yihiin sida ujeedo wax ku ool ah. Waxaa laga yaabaa inay u muuqato in qayb ka mid ah xayawaanka aan la samayn karin gacanta, maadaama ay tahay qaab dhismeed adag oo u baahan saxnaan iyo gaabisnimo.
Wixii milkiilaha ah ee muuqaalka dacha ama deyrku waa muhiim weyn. Naqshadeynta waxaa qaban kara khabiiro, laakiin, haddii loo baahdo, waxaad adigu samayn kartaa. Iridda waxay noqon doontaa quruxda wanaagsan ee dayrka ama dhismaha. Waxaa sidoo kale lagu dhisi karaa gacmahagaaga mashruucaaga. Noocyada ilo-dhaqatada Ilkaha bixinta waxay noqon kartaa noocyo kala duwan.
Abuur dharka gacmahaaga si aad u bixiso
Riyooyinka mulkiilayaasha badan ee guryaha xayawaanka ah ama guryaha gaarka ah waa wabiyo leh biyo. Qurxinta noocan oo kale ah waxay isla markiiba isbedeshaa oo dib usoo celisaa goobta, waxay ku darsataa sabiibta, waxayna soo cusbooneysiisaa maalmo kulul. Dhirta qurxinta waxay noqon kartaa mid aad u yar waxayna ku haboontahay xittaa aag kooban. Dhismuhu waxa uu fududaa marka loo eego: Si loo abuuro dhisme leh gacmaheenna, waxaad u baahan doontaa inaad soo iibsato qalab dhismo ah oo si dhab ah u raaco talooyinka naga siiya.
Naqshadaha muuqaalka ah ee xagaaga xagaaga iyagoo leh gacmahooda, qaababka, qaababka naqshadeynta
Nashqada muuqaalka labadaba waa farshaxan iyo farsamad diirad saaran. Muuqaalka dhismaha si wanaagsan loo qorsheeyey wuxuu si fudud u shaqeynayaa, wuxuu abuuraa meel bannaan oo bannaan, wuxuu hagaajiyaa hareeraha, wuxuuna kaloo yareeyn karaa qiimaha kuleylka iyo qaboojinta guriga. Nidaamka qorshaynta ee qaabka dacha, mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee hagaajinta guriga, badanaa waa la iska indhatiraa.
Sida loo dhiso dabka nashqadda muuqaalka dhulka dacha
Ilaa hadda, in ka badan darsin oo naqshado kala duwan oo dabiiciyadeed oo asal ah ayaa la isku uruuriyey, taas oo dacha u adeegtey sidii qoryaha loo isticmaalo qoryaha, iyo jawi qurux badan oo hawada nadiif ah, iyo walxo muhiim ah oo lagu qurxiyo dhulka dalka. Qaar badan waxay raadiyaan inay qalab u yeeshaan sida nooc ka mid ah muraayadda oo ay gacmahooda ku haystaan ​​iyagoo gacan ka helaya qalabka jira.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Naqshad Weyn 2019